သနားတာနဲ့ကိုယ်ချင်းစာတာ ခွဲခြားနိုင်ပါစေ… – Trend.com.mm
တစ်ခါတစ်လေ သနားတာနဲ့ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်က ရောထွေးသွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သနားတာနဲ့ကိုယ်ချင်းစာနာတာ ခံစားမှုချင်း၊အဓိပ္ပာယ်ချင်း မတူညီပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ “ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်”ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာကို မျှဝေပေးတာ၊အကောင်းအဆိုးမျှဝေခံစားတာ၊အကြံဥာဏ်ပေးတာ၊ဂရုစိုက်ပေးတာမျိုးပါ။တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို မျှဝေခံစားပြီး နားလည်ပေးတတ်တာက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပါ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်က ဖိနပ်တစ်ရံတည်းကိုအတူတူစီးနေရသလို ခံစားချက်မျိုး၊ဖိနပ်တစ်ရံတည်း အတူစီးနေရတာဖြစ်လို့ ဖိနပ်ပေါက်တဲ့အခါ နာကျင်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုအတူတူသိတာမျိုးပါ။
သနားတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခု၊တစ်ခြားသူမှာမရှိတဲ့အခါ၊ကိုယ်ကပြည့်စုံပေမဲ့ တစ်ခြားသူကမပြည့်စုံတဲ့အခါမျိုးမှာ၊တစ်ခြားသူ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ သနားတဲ့စိတ် ကဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။သနားတာက တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံဆိုးမှုကို မျှဝေ ခံစားတဲ့စိတ် မျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲ သနားမိတာမျိုးပါ။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်က အပြောင်းအလဲတစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်စေပေမဲ့ သနားလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သိမ်ငယ်စိတ်၊ အားငယ်စိတ် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
သနားတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်က ဒီလိုဖြေထားခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာ အတားအဆီးမရှိတဲ့အတွက် ပေးတဲ့သူကလည်း အတိုင်းအဆမရှိ မျှဝေနိုင်သလို လက်ခံရရှိတဲ့သူကလည်းကျေနပ်စွာယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ သနားစိတ်ကတော့ အတားအဆီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်လူကိုသနားပေမဲ့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ နံရံတစ်ချပ်ခြားနေသလိုပဲ”လို့ဖြေထားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် တစ်ခြားတစ်ယောက်က နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ သနားစိတ်နဲ့နားမထောင်ပါနဲ့၊ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့နားထောင်ပါ။ငါသာ နေမကောင်း
ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့။တစ်ခြားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့နားထောင်ပါ။စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ နားမထောင်ပါနဲ့။ သူနေမကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့၊သူစိတ်တွေနာကျင်နေပေမဲ့သင့်ဆီကသူလိုချင်တာသူ့ကိုကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ နားထောင်ပေးဖို့ပါပဲ။သူ နေ့တိုင်းအကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေ ကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊အိပ်ရာကမထနိုင်တဲ့နေ့တွေလည်းရှိမယ်၊စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်၊နေ့ရက်တိုင်းကတိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေ မယ်။သင့်ဆီက သူလိုချင်တာကသူ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေခံစားပေးဖို့ပါ။သူနေမကောင်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊သူစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက် သင့်ဆီက သနားတာမျိုးကို သူလိုချင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။သနားတယ်ဆိုပြီး သူ့စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်ကိုကူညီပေးလိုက်ရင် သူငွေကြေးပဲ ရသွားမှာပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတဲ့ အချင်းချင်းမျှဝေခံစားတာမျိုးကိုရသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်သူကမှ တစ်ဖက်လူကသနားတာမျိုးကိုမခံချင်ပါဘူး။သင့်ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် “နင့်ကိုသနားလိုက်တာဟယ်”လို့လာပြောရင် သင်လည်းကြိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင် စိတ်အားငယ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်” အော် ငါ့ဘ၀ကတော်တော် သနားဖို့ကောင်းနေပါလား”ဆိုပြီးသိမ်ငယ်သွားပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေကို သင့်ကိုပြောပြချင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ဒါကသနားခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အပေါ်ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပေးတာပဲလိုချင်ကြတာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ငွေကြေးလိုအပ်နေသူ၊အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီဖို့သွားတဲ့အခါ၊ကူညီခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါသနားတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မကူညီပါနဲ့။သနားတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ စေတနာမထားပါနဲ့။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ကူညီပါ။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့စေတနာထားပါ။ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့သူဟာငါသာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ငါ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူက ငါသာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ငါချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ မျှဝေကူညီပေးပါ။ ဒီလောကကြီးထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှသနားစရာလို့မမြင်မိပါစေနဲ့။ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့သာ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။
သနားစိတ်နဲ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို ခွဲခြားပြီး တစ်ဖက်သားကိုကူညီပေးနိုင်ပါစေ….
တဈခါတဈလေ သနားတာနဲ့ကိုယျခငျြးစာတတျတဲ့စိတျက ရောထှေးသှားတတျပါတယျ။ တကယျတော့ သနားတာနဲ့ကိုယျခငျြးစာနာတာ ခံစားမှုခငျြး၊အဓိပ်ပာယျခငျြး မတူညီပါဘူး။
ကိုယျခငျြးစာတယျဆိုတာ “ငါသာသူ့နရောမှာဆိုရငျ”ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့အရာကို မြှဝပေေးတာ၊အကောငျးအဆိုးမြှဝခေံစားတာ၊အကွံဉာဏျပေးတာ၊ဂရုစိုကျပေးတာမြိုးပါ။တဈခွားသူတဈယောကျရဲ့ ခံစားခကျြကို မြှဝခေံစားပွီး နားလညျပေးတတျတာက ကိုယျခငျြးစာစိတျပါ။
ကိုယျခငျြးစာစိတျက ဖိနပျတဈရံတညျးကိုအတူတူစီးနရေသလို ခံစားခကျြမြိုး၊ဖိနပျတဈရံတညျး အတူစီးနရေတာဖွဈလို့ ဖိနပျပေါကျတဲ့အခါ နာကငျြရတဲ့ခံစားခကျြကိုအတူတူသိတာမြိုးပါ။
သနားတယျဆိုတာ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့အရာတဈခု၊တဈခွားသူမှာမရှိတဲ့အခါ၊ကိုယျကပွညျ့စုံပမေဲ့ တဈခွားသူကမပွညျ့စုံတဲ့အခါမြိုးမှာ၊တဈခွားသူ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့အခါမြိုးမှာ သနားတဲ့စိတျ ကဖွဈပျေါတတျပါတယျ။သနားတာက တဈခွားသူတဈယောကျရဲ့ ကံဆိုးမှုကို မြှဝေ ခံစားတဲ့စိတျ မြိုးနဲ့မဟုတျပဲ သနားမိတာမြိုးပါ။ကိုယျခငျြးစာစိတျက အပွောငျးအလဲတဈခုခု ဖွဈပျေါစပေမေဲ့ သနားလိုကျတာဆိုတဲ့စိတျကတဈခွားတဈယောကျရဲ့ စိတျကို သိမျငယျစိတျ၊ အားငယျစိတျ ဖွဈသှားစပေါတယျ။
သနားတတျတဲ့စိတျနဲ့ကိုယျခငျြးစာစိတျအကွောငျးကိုလလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာ အမြိုးသားတဈယောကျက ဒီလိုဖွထေားခဲ့ပါတယျ။
“ကိုယျခငျြးစာစိတျဆိုတာ အတားအဆီးမရှိတဲ့အတှကျ ပေးတဲ့သူကလညျး အတိုငျးအဆမရှိ မြှဝနေိုငျသလို လကျခံရရှိတဲ့သူကလညျးကနြေပျစှာယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ သနားစိတျကတော့ အတားအဆီးတဈခုရှိနပေါတယျ။တဈဖကျလူကိုသနားပမေဲ့ နှဈယောကျကွားမှာ နံရံတဈခပျြခွားနသေလိုပဲ”လို့ဖွထေားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ တဈခွားတဈယောကျက နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့အကွောငျးပွောပွတဲ့အခါ သနားစိတျနဲ့နားမထောငျပါနဲ့၊ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့နားထောငျပါ။ငါသာ နမေကောငျး
ဖွဈခဲ့ရငျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ပေါ့။တဈခွားတဈယောကျကသူ့ရဲ့အဆငျမပွတေဲ့ခံစားခကျြတှအေကွောငျးပွောပွတဲ့အခါ ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့နားထောငျပါ။စိတျမကောငျးဖွဈတဲ့စိတျနဲ့ နားမထောငျပါနဲ့။ သူနမေကောငျးဖွဈနပေမေဲ့၊သူစိတျတှနောကငျြနပေမေဲ့သငျ့ဆီကသူလိုခငျြတာသူ့ကိုကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ နားထောငျပေးဖို့ပါပဲ။သူ နတေို့ငျးအကောငျးဆုံး ကွိုးစားခဲ့တဲ့အကွောငျး၊ခကျခဲတဲ့နရေ့ကျတှေ ကိုဘယျလိုဖွတျကြျောခဲ့ရတယျဆိုတဲ့အကွောငျး၊အိပျရာကမထနိုငျတဲ့နတှေ့လေညျးရှိမယျ၊စီးပှားရေးအဆငျမပွလေို့စိတျညဈရတဲ့အခြိနျတှလေညျးရှိနိုငျတယျ၊နရေ့ကျတိုငျးကတိုကျပှဲတဈခုလိုပဲဖွဈခငျြဖွဈနေ မယျ။သငျ့ဆီက သူလိုခငျြတာကသူ့ခံစားခကျြတှကေိုမြှဝခေံစားပေးဖို့ပါ။သူနမေကောငျး ဖွဈနတေဲ့အတှကျ၊သူစီးပှားရေးအဆငျမပွတေဲ့အတှကျ သငျ့ဆီက သနားတာမြိုးကို သူလိုခငျြတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။သနားတယျဆိုပွီး သူ့စီးပှားရေးလိုအပျခကျြကိုကူညီပေးလိုကျရငျ သူငှကွေေးပဲ ရသှားမှာပါ။ ကိုယျခငျြးစာစိတျဆိုတဲ့ အခငျြးခငျြးမြှဝခေံစားတာမြိုးကိုရသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဘယျသူကမှ တဈဖကျလူကသနားတာမြိုးကိုမခံခငျြပါဘူး။သငျ့ကို တဈခွားတဈယောကျက ဘယျလိုအကွောငျးမြိုးနဲ့ဖွဈဖွဈ “နငျ့ကိုသနားလိုကျတာဟယျ”လို့လာပွောရငျ သငျလညျးကွိုကျမှာ မဟုတျပါဘူး။အဲ့ဒါအပွငျ စိတျအားငယျတတျတဲ့သူဆိုရငျ” အျော ငါ့ဘဝကတျောတျော သနားဖို့ကောငျးနပေါလား”ဆိုပွီးသိမျငယျသှားပါလိမျ့မယျ။သူတို့ရဲ့စိတျမကောငျးစရာအဖွဈအပကျြတှေ၊ဆုံးရှုံးမှုတှကေို သငျ့ကိုပွောပွခငျြပွောပွလိမျ့မယျ။ဒါကသနားခံခငျြလို့မဟုတျပါဘူး။ သူတို့အပျေါကိုယျခငျြးစာနားလညျပေးတာပဲလိုခငျြကွတာပါ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ဆငျးရဲနှမျးပါးသူ၊ငှကွေေးလိုအပျနသေူ၊အကူအညီလိုအပျနသေူတှကေို ကူညီဖို့သှားတဲ့အခါ၊ကူညီခှငျ့ကွုံလာတဲ့အခါသနားတဲ့စိတျမြိုးနဲ့မကူညီပါနဲ့။သနားတဲ့စိတျမြိုးနဲ့ စတေနာမထားပါနဲ့။ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ကူညီပါ။ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့စတေနာထားပါ။ငှကွေေးလိုအပျနတေဲ့သူဟာငါသာဖွဈခဲ့ရငျ၊ငါ့မိသားစုဝငျတဈယောကျယောကျသာဖွဈခဲ့ရငျ၊ဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူက ငါသာဖွဈခဲ့ရငျ၊ငါခဈြတဲ့သူတဈယောကျယောကျသာဖွဈခဲ့ရငျဆိုတဲ့စိတျမြိုးနဲ့ မြှဝကေူညီပေးပါ။ ဒီလောကကွီးထဲမှာ ဘယျသူ့ကိုမှသနားစရာလို့မမွငျမိပါစနေဲ့။ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့သာ မွငျအောငျကွညျ့ပါ။
သနားစိတျနဲ့ကိုယျခငျြးစာစိတျကို ခှဲခွားပွီး တဈဖကျသားကိုကူညီပေးနိုငျပါစေ….
အိပ်ချင်စဖွယ် တီထွင်ထားတဲ့ အမိုက်စား Kotatsu အိပ်ယာ
ချက်ပြုတ်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ